Labels: ကဗျာ2comments
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာတာရာမင်းဝေ၏ အထက်ပါ ကဗျာကို အီးမေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့လာသူ အမည်မဲ့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဒါ ပေ မယ့် . . . ဘယ်ဝါးကျည်ထောက်ကိုမှ
ဒါ ပေ မယ့် . . . ဘယ်ဓားအိမ်ထဲမှာမှ အိပ်မက်မက်
… ငါဟာ အက္ခရာတစ်လုံးဖြစ်သွားတယ်
ငါ့ကိုယ်ငါ ပြန်ဖတ်လို့ မရတော့ဘူး။
ငါဟာ အရက်တစ်ပုလင်း ဖြစ်သွားတယ်
ငါ့ကို ဘယ်သူက ဝင်ပလုပ်ကျင်းမလဲဆိုတာကို
… စောင့်နေတယ်… ။ ။
မှတ်ချက်။ ။ Idea မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည့် ဆရာတာရာမင်းဝေ၏ အထက်ပါ ကဗျာကို အီးမေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့လာသူ ကိုနေမိုးဝေအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
တာရာမင်းဝေ ရဲ့ အမေ့အိမ်
- ဖန်တီးခဲ့တဲ့ လက်ရာများထဲက ကိုယ်တိုင်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ပေးပါလား။
+ ဒီကဏ္ဍအတွက် “ပိတောက်ပင်ကို အိပ်မက်,မက်တဲ့ကောင်လေး” ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုတိုကို ရွေးပေးလိုက်ချင်တယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလထုတ် “ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်” မဂ္ဂဇင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတိုလေးပါ…။ ဒီဝတ္ထုတိုလေးမှာနာမည်ရင်းရှိပါတယ်…။ ပရိတ်သတ်ကို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ… သူ့ နာမည် ဟာ…“ပိတောက်ပင်ကို အိပ်မက်,မက်တဲ့ကောင်လေး” ပါ ။ နာမည်ရင်းကတော့… “ဘယ်လမ်းကို သွားနေမှန်းမသိတဲ့ မြေပုံ” ဖြစ်ပါတယ်။
- အဲဒီဝတ္ထုနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွေ့ ဘဝ၊ ခံစားမှုတို့ ပတ်သက်မှုရှိရင် နည်းနည်း ပြောပြပေးပါ။
+ ကျွန်တော်ဟာ အမေ့အိမ်ကခွဲပြီး (၇) နှစ်တာခရီးတစ်ခုကို သွားခဲ့ဘူးပါတယ်…။ဘန်ကောက်ကို Shopping ထွက်တာ မဟုတ်သလို ၊ နိုင်ငံခြားသင်္ဘောလိုက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလို ခရီးတစ်ခု ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ …။
အမေ့အိမ်ကို ပြန်အလာ … လမ်းမှာ ခံစားရတာတွေရှိပါတယ် ။ လောကအကြောင်း ၊ ကိုယ့်အကြောင်း ပြန်တွေးမိတာတွေရှိပါတယ်…။ ရင်းနှီးသူတွေသိကြပါတယ် ။ အဲဒီခံစားချက် ၊ အဲဒီ အတွေးအမြင်ကို အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြန်တည်ဆောက်တာပါပဲ။
- ဒီလိုဖန်တီးဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို inspiration ရပါသလဲ။
+ ဒီဝတ္ထုမှာ inspiration မပါ ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀မှာ … ကိုယ်ဖြတ်သန်း ဆင်ခြင်မိတဲ့ အနေအထားတစ်ရပ်ကို အနုပညာ တစ်ခုအဖြစ်အန်ထုတ်ပစ်ချင်တယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ဒီဝတ္ထုကိုရေးဖြစ်တယ်။ရေးအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ စိတ်ဘဝ အသိတွေကြောင့်ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ် (mental virus) လို့ခေါ်တယ် ။ ပညာရပ်ဝေါဟာရ အရ “N’ach” လို့ သုံးတယ်။
- ဒီဝတ္ထုကို တင်ပြရာမှာ ပုံသဏ္ဍာန်ရွေးချယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခက်အခဲရှိပါသလား။
+ ဒီလက်ရာကို ပရိတ်သတ်သိအောင်တင်ပြရာမှာ အခက်အခဲရှိသလားဆိုတော့ … ရှိတယ်။
ခက်တယ်။ အဲလို အမေ့အိမ်ပြန်တဲ့အကြောင်း ကဗျာတွေ၊ ဝတ္ထုတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေများလှပြီ။
အများစုကတော့. . . အောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူပြီးပြန်တာတို့၊ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် နာကျင်ကြေကွဲပြီး ပြန်တာတို့
. . . အဲဒါတွေပေါ့…။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပြောချင်တာအဲဒါမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒီအချက်အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော့ဘဝမှာ
အမေ့အိမ်ကနေ အမေ့အိမ် ကနေ တနေရာကို ထွက်သွားတာ၊ ပြီး…ပြန်လာတာ များလှပြီ။ သိပ္ပံ အမြင်အရ ပြောရရင် တော့ အရွေ့“သုည” ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီနေရာမှာ လည်ပတ်နေရတဲ့ ကျွန်တော့်ဘဝရဲ့
သံသရာစက်ဝိုင်း အငယ်စားလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တင်ပြချင်တာ။ အဲဒီလို စက်ဝိုင်းကလေးတွေ အများကြီးကို
… ကျွန်တော် လည်ပတ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမဲ့…ဘာကို ဘဟိုပြုပြီး လည်ပတ်တာလဲ…။ ဒီစက်ဝိုင်းတွေ ဘယ်ကစတာ
လဲ…။ အဲဒါကို ကျွန်တော်က ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပရိသတ်ကိုလည်း ခံစားကြည့်စေချင်တယ်။ အဲဒီတော့ ပြောရခက်တယ်။ ရအောင်ပြောမယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာပါပဲ…။
- ဒီဝတ္ထုမှာ အကြောင်းအရာနဲ့ ပုံသဏ္ဍန် ဘယ်လို တွဲဖက်ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။
+ ဒီဝတ္ထုကို တင်ပြရာမှာ အကြောင်းအရာနဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ဆိုပြီး တွဲစပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဗျ…။ ‘Form and Content’
ဆိုတာကို ကျွန်တော်က ပယ်ထားတယ်။ ‘Material and Structure’ဆိုတဲ့ အတွဲအစပ်ကိုပဲ ကျွန်တော်သုံးတယ်။
စကားလုံးတွေကို ‘Material’ အဖြစ် အသုံးချပြီး၊ဒီဝထ္ထုရဲ့ ‘Structure’ ကိုတည်ဆောက်တယ်။ ဒါမျိုးပေါ့။ “ဂယက်” ပြောင်းပြန်ထတဲ့ နည်းကို သုံးခဲ့တယ်။ ဇတ်ကောင်ရဲ့ ဘဝနဲ့ သက်တမ်းကို…ကျယ်ရာကနေ…အချိုးကျ ကျုံ့ဝင်သွားစေတဲ့ နည်းပေါ့။(အဲလို တည်ဆောက်မှုကို post-modernist တွေကတော့ Recursive Structureလို့ သုံးကြတယ်။) ပြီး …အဲဒီအလွှာတွေကို ထပ်ပစ်တယ်။ (အဲဒါမျိုးကို post-modernist တွေက ‘strang loop” လို့ သုံးတာမျိုး တွေ့ဖူးတယ်) ပြီးတစ်လွှာကနေတစ်လွှာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလုပ်ပစ်တယ်။(အဲဒါမျိုးကို post-modernist တွေက ‘Flickering’ လို့ သုံးတာမျိုး တွေ့ဖူးတယ်။)
- ဒါဆိုရင် ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာ ကြားခဲပစ္စည်းတွေ ဘယ်လိုသုံးခဲ့ပါသလဲ။
+ ဝတ္ထုဆိုတော့လည်းဗျာ စကားလုံးကြားခံပစ္စည်း ‘verbal Medium’ နဲ့ ပုံဖော်ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီဝတ္ထုမျိုးက စကားလုံး ကိုသိပ်အားထားလို့ မရဘူး ‘Concept’ ကိုပံအားထားရတယ်။ ကိုယ်က “ဂယက်ပြောင်းပြန်ထည့်နည်း”
ကို သုံးပြီး ရေးခဲ့ပေမဲ့ ဖတ်သူက “ဂယက်အစဉ်ရိုက်ခတ်နည်း” အတိုင်းပဲ ဖတ်ရတယ်။ ဒီဝတ္ထုထဲမှာ စက်ဝိုင်း
ကျုံ့ ကျုံ့ သွားပြီးနောက်ဆုံး ငယ်ဘဝမှာ… “ဝလုံးကို ဘယ်က စဖတ်ရမလဲ မသိတာ” ကို ရေးပြထားတယ်။
အဲဒါဟာ ဒီဝတ္ထုရဲ့ အနှစ်ချုပ် Concept ပဲ။ ဝလုံးကို ရေးတာဟာ စက်ဝိုင်းကို ဆွဲတာနဲ့ မတူဘူး။ စက်ဝိုင်းက ဗဟို
ချက်ရှိတယ်။ ဝလုံးဗဟိုချက် မရှိဘူး။ လည်ပတ်နေရမဲ့ ဗဟိုချက် မရှိသလို ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ဘဝကို ပြောချင်တာ…။ ပြီး အဲဒီလည်ပတ်မှုက ဘယ်က စမှန်းမသိတာကို ပြောချင်တာ။
ဝတ္ထုရဲ့ အဲဒီအချက်ကလေးကို . . . KRA လို့ ခေါ်တယ်။ “Key Result Area” ပေါ့လေ။ သော့ခက်ကျတဲ့ အပိုင်းပေါ့။ post-modernist တွေမှာလည်း အဲလို နည်းစနစ်မျိုး ရှိတယ်…။
“Mese-en abyme” လို့ခေါ်တယ်။ တခြားဆက်ပြောရင်တော့ ပြောစရာတွေ အများကြီးရှိမယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ပဲ ပြောချင်တယ်ဗျာ။
- ဒီလက်ရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ တုန့်ပြန်မှု ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
+ ဒီဝတ္ထုလေးရဲ့ ပျံ့နှံ့မှုက ဘယ်လောက်မှ မရှိဘူး။ ထည့်ပေးတဲ့ မဂ္ဂဇင်းက စောင်ရေ မများဘူး။ပြီး…
ဧပြီလထုတ် မဂ္ဂဇင်းဆိုတော့ သင်္ကြန်အဖွဲ့ အနွဲ့စာမူတွေနဲ့ ရောပြီး ပါသွားရတာ။ သူတောင် အူကြောင်ကြောင်
ဖြစ်သေး။ အလေးထားပြီး ဖြတ်မိတဲ့သူ နည်းတယ်။ အကြိုက်တွေ့ခြင်း မတွေ့ခြင်းက အဓိက မကျဘူး …
- အခုအချိန် ဒီလက်ရာကို ပြန်သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကော။
ဒီဝတ္ထုအကြောင်းလေး..အထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေက… ပညာရပ် ဝေါဟာ၇တွေပါသွားတယ်။
ဝတ္ထုတိုတွေ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ နေရာမှာ တချို့ကိုလည်း သီအိုရီ သဘောအရ စမ်းသပ်ရေးတာတွေရှိတယ်။
စိတ်ကြိုက်တွေ့မှ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်တယ်ထင်မှပေါ့။ အများစုကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် ရေးတယ်။ ဘယ်သီအို၇ီ၊ ဘယ်ဝါဒ ဘယ်နည်းစနစ်ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ ခု… ဝတ္ထုတိုလေးက ဒုတိယ အမျိုးအစားထဲမှာပါ, ပါ တယ်။
- တခြားပြောချင်တာများ ရှိသေးရင်…။
+ အခု…ရှင်းလင်းချက်မှာ post-modern နည်းဗျူဟာတချို့ အခြားပညာရပ်ဝေါဟာရ တချို့ကို … နီးစပ်ရာ
ဆွဲယူရှင်းလင်းခဲ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုမှ အနုပညာစ,ဖန်တီးမယ့် ညီငယ်၊ညီမငယ်တွေကိုတော့ တွန့်
မသွားစေချင်ဘူး။ သူတို့ကို လည်း လွပ်လွပ်လပ်လပ် ဖန်တီးစေချင်တယ်။ အနုပညာကို ချစ်ဖို့၊ ခံစားတတ်ဖို့
အနုပညာနဲ့အတူ အသက်ရှင်တတ်ဖို့ အဓိကပါပဲ…။
မှတ်ချက်။ ။ Beauty မဂ္ဂဇင်း၏ “သူနှင့် သူ့အနုပညာ” ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည့် ဆရာတာရာမင်းဝေ၏ အထက်ပါ အင်တာဗျူးကို အီးမေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့လာသူ ကိုနေမိုးဝေအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ပိတောက်ပင်ကို အိပ်မက်မက်တဲ့ ကောင်လေး
လင်းရှပြာရီသော မီးတောက်မီးလျှံများက ပင်လယ်လှိုင်းလုံးကြီးတွေလို ခုံးဝုန်းထကာ၊သူ့ကို ဒေါသမာန်ဟုန်းဟုန်းဖြင့် စိုက်ကြည့် နေကြသည်။
မီးမှော်ဆရာထံ “ခေါစာ” ပစါကျွေးခံရရာမှ လူးထ ပြန်ပြေးခဲ့ရသော သားကောင်ပမာ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ မီးခိုးမှိုင်းမျှင်များက ရစ်ခွေလိမ်ပတ်လျက်။
နောက်သို့ တစ်လှမ်းချင်း ပြန်ဆုတ်နေရင်းက ကြေကွဲစွာ ပြုံးဖြစ်သည်။ လူမိုက်ဆန်စွာ တိုးဝင်ပစ်ရဲသော်လည်း လူသားဆန်စွာပင် သူခြေကုပ်မမြဲတော့။ အလဲလဲ အပြိုပြို ဆံပင်တွေကို သပ်တင်လိုက်၏။ သူ့သက်ပြင်း က မီးတောက်လက်တံကို ပို၍ လင်းသွားစေသည်။
သူနောက်သို့ တစ်လှမ်းချင်း ဆုတ်နေဆဲ၊ အိပ်မက်၊ မျှော်လင့်ချက်၊ ရွှေရောင် အနာဂတ်လမ်းကလေး အားလုံးကို သူစတေးခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ဖြင့် လာရာလမ်းကိုပဲ သူ လှည့်ပြန်ခဲ့သည်။
ငယ်ငယ်ကလိုပင် လမ်းပေါ်မှ ကျောက်ဆောင် ကျောက်ခဲများကို မိုးကောင်းကင်ဆီ တုပနိုင်သည့် မြေပြင်၏ မာကျောသော တိမ်ပွင့်တိမ်စများဟု သူထင်မြင်မိနေဆဲပဲဖြစ်၏။ အိမ်အပြန်လမ်းကို ခေါင်းငုံ့၍ လျှောက်လှမ်းလာခိုက် လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ “ညီညီ့” ကို ဆုံတွေ့လိုက်ရခြင်းဖြစ်လေသည်။
ညီညီက အသက်နှစ်ဆယ် ရှိနေပြီ။ ကြမ်းလွှသော အညိုရောင် ဝတ်စုံကို ဝတ်ဆင်လျှက် လက်ထဲမှာ စာအုပ်တစ်အုပ် ကိုင်ထားရင်း သူ့ကို ပြုံးရယ်ပြလေသည်။
ညီညီထောင်ပြသော စာအုပ်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်ရင်း၊ သူခေါင်းညိမ့်ပြလိုက်သည်။“မာတင်ဘုရှ်” တည်းဖြတ်သော မြောက်အမေရိကန် ကဗျာစာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်၏။ သူခေါင်းညိတ်ပြသည်ကို မြင်သောအခါ ညီညီက ပို၍ လင်းမြပြုံးရယ်လာပြီး …
“အဲဒါဆို … ကျွန်တော် ဆွေးနွေးချင်တာလေး နည်းနည်း ရှိတယ်ဗျာ…”
“ဒီစာအုပ်ထဲမှာ နိမိတ်ပုံနဲ့ သင်္ကေတကို ခွဲပြထားတယ် …”
“ဥပမာ… ယေရှုခရစ်ကို နိမိတ်ပုံနဲ့ ရေးပြရင် ဂျုံခင်းတွေကိုယူလာတဲ့ ဝတ်ရုံဖြူနဲ့ လူလို့ ရေးပြတာမျိုး”
“ဒါပေမဲ့ ယေရှုခရစ်ကိုပဲ သင်္ကေတ နဲ့ပြတော့ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပြလိုက်တယ်…”
ညီညီ့ မျက်လုံးများက စိတ်ဝင်စားမှု တို့ဖြင့်အရောင် လက်ဖြာနေသည်။
“အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တွေးမိတာ လေး တစ်ချက်ရှိလာတယ်… ဒီလိုလေ…”
ညီညီ့စကားကို ဆုံးအောင် သူနားမထောင်လိုက်ရပါ။ လေကြမ်းတို့ လွင်ဖြူးတိုးဝှေ့လာ၏။ အစိမ်းရွက်တွေ ဖျတ်ဖျတ် လူးခါနေသော ပိတောက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကို မြင်ယောင်လွမ်းဆွတ်လိုက်မိ၏။ တိုးသဲ့သော်လည်း တုံခါကျစ်လျစ်နေသည့် ရထားဥသြဆွဲသံကို ကြားလိုက်ပြန်သည်။
ညီညီ့ကို ထားခဲ့ကာ သူဆက်လက်ထွက်ခွာ လာခဲ့၏။
လေထဲမှာ တစုံတရာက တိုးဆွတ်ပါဝင်နေသည်လား။ သူ့မှာ အသက်ရှုရတာပင် မူးမိုက်လာသည်။တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချလိုက်၏။
အမြင်ကို ကြည်လင်အောင် ကြည့်သည်။ ထိုမှာပင် လှေခါးထစ် တစ်ခုပေါ်မှာ ထိုင်နေသော ညီညီ့ကို သူတွေ့လိုက်ရသည်။
ညီညီက အသက်ဆယ့်သုံးနှစ် ရှိနေပါပြီ။ အပြာရောင်အဝတ်အစားတို့ကို မသေမသပ် ဝတ်ဆင်ထားပြီး အဝေးသို့ ငေးကြည့်နေသည်။
သူက ရှေ့မှာ သွားရပ်လိုက်တော့မှ ညီညီမြင်သည်။ သူ့ကို ပြုံးလွင်စွာ စကားဆိုရန် ညီညီ့နှုတ်ခမ်းတို့ အဟမှာပဲ သူကဦးအောင်ပြောလိုက်၏။
ညီညီက ချက်ချင်းပြန်မဖြေသေးပဲ ဖုန်အလူလူးပေကျံနေသော သူ့ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်၏။ ထို့နောက်မှ
“မနေ့က ကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့ စကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ အတွေ့အကြုံဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကျောင်းတော် ပဲတဲ့.. အဲဒါ ဟုတ်လားဟင်”
သူ … ပြန်မဖြေဖြစ်သေး ညီညီက သူ့မျက်နှာကို နွေးနွေးထွေးထွေး ငေးကြည့်နေ၏။ သူက သက်ပြင်း တစ်ချက်ကို ငုံ့ဝှက်ကာချလိုက်ရင်း … ။
“ဒါပေမယ့် စကားပုံမဟုတ်ဘူး၊ လူတစ်ယောက်ပြောသွားတဲ့ စကားပဲ၊ စကားက ဒီလာက်နဲ့လည်း မပြည့်စုံသေးဘူး နောက်မှာကျန်သေးတယ်”
သူက အဓိပ္ပာယ် ခန့်မှန်းရခက်သည့် အပြုံးတစ်ချက်ကို ပြုံးလိုက်မိရင်း …
“အတွေ့အကြုံဟာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ကျောင်းတော်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ သင်တန်းကြေး ကြီးလွန်းတယ်တဲ့”
‘ညီညီ’ က ဘာမှ ပြန်မပြောတော့ပဲ တွေငိုင်သွားသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် လေစီထဲမှာ လွင့်မျောပါလာ သည့်ပိတောက်ရနံ့ သန့်ခနဲ သူရှူရှိက်လိုက်ရသည်။ လူများ၊ ခွေးလေခွေလွင့်များ၊ လမ်းလျှောက်နေသော ခြေထောက်များ၊ မော်တော်ကားများ၊ ရပ်ကျန်ခဲ့သော စည်းရိုးမှတ်တိုင်များ၊ ဆူညံသော အသံဗလံများနှင့်အတူ သူနှင့် ညီညီ လူချင်းကွဲသွားလေသည်။
သစ်ကိုင်း၊သစ်ရိုင်းကလေးများ ယိုင်ကျဲပေါက်ရောက်နေရာ လမ်းကလေးထဲသို့ သူလျှောက်သွားသော အခါ ပုစဉ်းရင်ကွဲ တစ်ကောင်က အချိန်အခါမဟုတ် စူးစူးဝါးဝါး ထအော်၏။
လမ်းကလေးသည် တိတ်ဆိတ်၏ ။ ပိတောက်ရွက်ကြွေတို့က လမ်းနံဘေးတစ်လျှောက်မှာ ပါးပါးလျလျ ဝပ်စင်းနေကြ၏။ လမ်းကလေးအဆုံး၌ အဖြူရောင် ရှပ်အင်္ကျီကလေးနှင့် ရှင်းသန့်စင်ကျယ်နေသော ညီညီ့ကို တစ်ကိုယ်တည်း ဆော့ကစားလျက် တွေ့ရ၏။
ညီညီက မြေပေါ်မှာစက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုကို တုတ်နှင့်ရေးဆွဲနေရမှ သူ့ကို မော့ကြည့်၏ ။ သူကပြုံးရယ်ပြ ရင်း… ငုံ့ကိုင်းနှုတ်ဆက်လိုက်၏ ။
ညီညီက ခြောက်နှစ်သားရှိပြီ ဖြစ်၏။ ကျောင်းမှာ စာသင်ခါစ အရွယ်ပင် ရှိဦးမည်။ သူ့ကို မျက်တောင်များ တဖျတ်ဖျတ် ပုတ်ခတ်ကာ မော့ကြည့်ရင်း …
သူက ခေါင်းမညိတ်၊ ခေါင်းမခါ။
သူရယ်မောမိလိုက်၏။ သူ့ရယ်သံက အတန်ငယ်ရှည်လျားသွားသဖြင့် ညီညီက ဆုံးအောင်မစောင့်နိုင်ဘဲ ထပ်မေးသည်။
“ဘယ်နှတန်းရောက်ပြီလဲ ဟင်…ဟိုး ဆယ့်လေးငါးတန်း အထိလား…”
“အင်း … ဟုတ်တယ်…”
ညီညီက လက်ညိုးလေးထောင်ပြီး ဆက်မေးသည်။
“ဘွဲ့တော့မရလိုက်ပါဘူးကွာ… ဘာဖြစ်လို့လဲ ညီညီဘာပြောချင်လို့လဲ…”
သူက ထိုသို့စကား ထောက်လိုက်မှ ညီညီက သူ့မူလကိစ္စကို ပြန်သတိရသွားသလို …
လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားသော တုတ်နှင့် မြေပြင်ပေါ်မှာသူရေးဆွဲထားသော စက်ဝိုင်းကို ညွှန်ပြကာ
“ညီညီ့ ဝလုံက ဝိုင်းသားပဲ အကြီးကြီး…”
ညီညီ့စကားကြောင့် နှာခေါင်းကို လင်နှင့် ပွတ်သပ်က ပြုံးယောင်ယောင်ဖြစ်မိရင်း…
“ဘာမေးမှာလဲ ညီညီရဲ့ …”
“ဝလုံးကို ဘယ်က စဖတ်ရလဲ”
ဝလုံးကို ဘယ်က စဖတ်ရမလဲ..သူကြောင်အ နေစဉ် လေတစ်ချက် တဝှေ့ဝှ့ သက်၏။ ပိတောက်ရွက် ကြွေများ မြေပေါ်မှာ ဖွာဆန်ကြဲသွားသည်။
“ဟင် … မသိဘူးလားလို့…”
သူဘာမှ ပြန်မဖြေဖြစ်။ ညီညီက အလို မကျသလို ခြေဆောင့်ကာ-
“ဒါလေးတောင်မသိဘူးတဲ့ ကျောင်းကြီးလည်း တက်လာသေးတယ်။ အမေ့ကိုပဲ မေးတော့မယ်”
ထို့နောက် ညီညီက နောက်ဘက်ခြံဝင်းလေးထဲ သို့ မျက်နှာမူလိုက်၏ ။
အိမ်ကလေး၏ တံခါးဝဆီမှ အသံထွက်လာ၏။
ထို့နောက် အပြင်သို့ တစ်ဦးထွက်လာကာ
“ဟဲ့ … သားငယ်”
ကပျာကယာ သူ့အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ရောက်လာပြီး သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်၏။ ကြည်နူးဝမ်းသာသော အသံဖြင့် …
“သားသား ညီညီ တစ်ယောက်ထဲလား … ဘယ်သူမှ မပါဘူးလား … ရထားတောင်ဆိုက်သွားပြီကိုး၊ သားက ကြိုအကြောင်းမကြားဘူးကွယ်။ အမေတောင် ညက သားကို သတိရနေတာ။
ထို့နောက် အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်မှာ ရထားလက်မှတ်ကလေးကိုင်ပြီး ရပ်နေဆဲဖြစ်သည့်သူ့ကို ခြံထဲဆွဲခေါ်၏။
“လာ … လာ … အထဲဝင်လေ… ဈေးထဲကလူတွေကတောင် မနေ့ကပဲ ညီညီ့ကို သတိရလိုက်တာလို့ ပြောနေကြသေး တယ်၊ သားရဲ့။
သူ လိုက်ဝင်၏ ။ အမေ့အိမ်သည် ငြိမ်းအေးတည်ကြည်လျက်ပင် ၇ှိသည်။ အမေ သူ့ခရီးဆောင်အိတ်ကို တနေရာ သို့ယူသွား၏။ သူ့ရင်ခွင်သည် ကြည်လင်လန်းဆန်းလာ၏။
“ဟေ … ဟား”
အမေ့အသံက နောက်ခန်းထဲမှ ထွက်လာခြင်းဖြစ်၏။ သူ့ကြောင့် အမေ အလုပ်ရှုပ်သွားပြီး ပျော်လည်း ပျော်နေသည်။
“သားငယ် … ဘာတုန်း …”
“သားတို့ ပိတောက်ပင်ကြီး ပွင့်ပြီလား”
“ဟဲ့ ဘယ်ပွင့်ဦးမလဲ သားရဲ့ ဒါပေမဲ့ အဖူးတွေကတော့ ဝေလို့ပဲသားရေ .. ပွင့်တာကတော့ ပွင့်တော့မယ်။နှစ်လည်း မကူးသေးဘူး။ သား သင်္ကြန်အမီ ပြန်ရောက်လာတာ အတော်ပဲ၊ နှစ်သစ်ကျရင် အမေနဲ့ သားနဲ့ ……………………………………………………………………… ”
အမေဆက်ပြောနေသည်များကို သူ မကြားတော့ပေ။ အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပစ်မှာ လှဲလျောင်းရင်း မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်လိုက်၏။ ကြေကွဲခဲ့ရသည်တို့ ကိုလည်း ပျယ်လွင့်မှုန်ဝါး၊ နာကျင်ခဲ့ရသည်များကို မေ့လျော့သွားသည်။
ထို့နောက် … ငြိမ်းချမ်းနှစ်ခြိုက်စွာ သူအိပ်ပျော်သွား၏။ သူ့အိပ်မက်ထဲမှာ ပိတောက်တွေ တစ်ပင်လုံး ဝေနေအောင် ပွင့်နေလေသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာတာရာမင်းဝေ၏ အထက်ပါ ၀တ္ထုတိုကို အီးမေးလ်မှတဆင့် ပေးပို့လာသူကိုနေမိုးဝေအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။